घोराहीमा न्यु ईयर इभ – Rajmarg Online
घोराहीमा न्यु ईयर इभ
घोराही,पुष ९ । घोराहीमा नंया वर्षलाई स्वागत गर्न प्यासन नेपालले भव्य आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय कलाकार आउनुका साथै स्थानिय कलाकारहरुको प्रस्तुति रहने प्यासन नेपालका अध्यक्ष भिजन घिमिरेले बताउनु भयो ।
साथै नंया वर्षको पुर्व सन्ध्याकालीनमा पुष १६ गते अर्थात विदेशी नंया वर्षको सांझमा गरिने विविध सांगीतिक कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनुभयो । दर्शकहरुलाई भरपूर मनोरञ्जनका लागी घोराही १५ भीमसेन टोल स्थितमा रहेको म्यान्गो गार्डनमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरीएको छ।
सांगीतिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय कलाकार चर्चित गायिका अन्जु पन्त,रुपक डोटेलसंगै स्थानीयहरु ब्यान्डहरूको विशेष प्रस्तुति रहनुका साथै डिजेको प्रस्तुति रहने छ भने नंया वर्षको आगमनलाई सांगीतिक माहोलसंगै हर्षोल्लासमय बनाउनका लागी विभिन्न टिकटहरुको आयोजना गरीएको अध्यक्ष भिजन घिमिरेले बताउनु भयो ।
साथै टिकटहरु तीन भागमा बांडिएको र भीआइपी पहिलो टिकटको मुल्य रु. १५ हजार ५ सय रहेको छ भने भीआइपी दोश्रो टिकटको मुल्य रु.१० हजार ५ सय र रु. १ हजार रहेको छ । भीआइपी टिकट खरीदमा ४ ओटा टिकट,दुई ओटा कोठा र विभिन्न परिकारहरुको पनि व्यवस्था रहेको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।
विदेशी नंया वर्षको शुभकामना आदान-प्रदानका लागी उक्त सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरीएको प्यासन नेपालका अध्यक्ष भिजन घिमिरेले बताउनु भयो ।
साथै पुर्ण सुरक्षाका लागी सल्यूट गोर्खाका प्रकाश घिमिरे लगायत सुरक्षाकर्मीहरु पनि रहेको जानकारी दिनुभएको छ । त्यसैगरी प्यासन नेपालको मिडिया पार्टनरमा गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक ,दांग खबर र जागरण अनलाईन रहेका छन ।